शीर्ष Features सुविधाहरू गुगल ब्लग खोजीबाट हराइरहेको छ? | Martech Zone
शीर्ष Features सुविधाहरू गुगल ब्लग खोजीबाट हराइरहेको छ?
सोमबार, फेब्रुअरी 26, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
म गुगल ब्लग खोज प्रयोग गर्दिन। कारण यो छ किनकि गुगल ब्लग खोजी एक विचार हो, तयारीको लागि उपकरण होइन। अर्को शब्दहरुमा, मैले खोजी गर्नु अघि मैले अनुसन्धान गर्न चाहेको कुरामा निर्णय गर्नुपर्दछ। ब्लगरहरूको लागि जुन प्रेरणाको खोजीमा छन्, तपाईले यहाँ फेला पार्नुहुने छैन! ध्यानमा राख्दै, यहाँ Google शीर्ष खोजीबाट हराइरहेका शीर्ष features सुविधाहरू छन्:
कीवर्ड विश्लेषण। के अन्तिम मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, एस्टेरामा कुरा गरिरहेको छ?
खोज विश्लेषण। के अन्तिम मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, एस्टेरामा खोज्दैछ?
भौगोलिक विश्लेषण। के खोजिएको छ र कहाँ?
जब मैले केहि वर्ष पहिले गुगल भ्रमण गरेको थिएँ, तिनीहरू क्याम्पसमा प्रत्येक प्रविष्टि बिन्दुमा केही शान्त स्क्रिनहरू थिए जुन वास्तविक-समय प्रश्नहरू कार्यान्वयन भइरहेको थियो। उनीहरूसँग पनि हाई-डेफ स्क्रिन थियो जुन विश्वका वरिपरि भाषा द्वारा प्रश्नहरूको संख्याको प्रतिनिधित्व सहित थियो। यो हेर्नको लागि रमाईलो थियो (मेरो थियरी यो हो कि यो वास्तवमै कहिँ पनि प्लग गरिएको थिएन तर यो चम्किलो र शान्त थियो, रdडी त्यसैले यसले हरेक आगन्तुकहरूको आँखालाई 'oohs' र आह 'ले समात्यो)।
यदि तपाईं वास्तवमै शान्त HDTV मा ती सबै तथ्या .्कहरू कब्जा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसोभए तपाईं पक्कै पनि हामीलाई हेर्नको लागि त्यहाँ निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो मान्छे के लेख्दै छन् र कहाँ खोज्दै छन् भनेर हेर्न एकदम मनमोहक हुनेछ।
मलाई गुगल मन पर्छ। मलाई गुगल थाहा छ। तर गुगल, तपाई टेक्नोराटी हुनुहुन्न। 🙂
PS: टेक्नोराटीबाट कोही कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् कि "दैनिक आवंटन एपीआई कलहरू "हो? तिमी मान्छेहरूले मलाई मार्दैछौ र यो तपाइँको साइटमा कहाँ छैन! मैले अनुरोध सर्भर साइड साइड क्याचि around गर्ने वरिपरि सम्पूर्ण अनुप्रयोग विकास गर्नुपर्दछ त्यसैले मैले आवंटनलाई ठक्कर दिइनँ ... जुनसुकै आवंटन हुन सक्छ… एआरग!
धन्यवाद, स्क्विडु! (Shoemoney नोट लिनुहोस्)
dnScoop भन्छ dnScoop.com वास्तव मा केहि मूल्य छैन
फेब्रुअरी १,, २०११ 26:१:2007 अपराह्न
एपीआई कलहरू day०० दिन सम्म सीमित छन्। मैले तपाईंको विजेट कोड प्रयास गरें, त्यो एकदम राम्रो छ! मैले सिफारिस गरेको प्रयोग भनेको यसलाई प्रति दिन एक पटक क्रोनबाट बाहिर चलाउनु हो र यसलाई स्थिर जाभास्क्रिप्ट फाइलमा प्रकाशित गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, मैले कल्पना गरेको एक उदाहरण सेटअप त्यो हो जहाँ विजेट दैनिक बिहान १ बजे प्रकाशित हुन्छ:
० १ * * * / usr / स्थानीय / बिन / php / home/dkarr/web/rank_widget.php> /usr/local/apache/htdocs/js/rank_widget.js
(विशिष्ट पथहरू बनाइएको छ तर आशा छ कि यसले एक राम्रो सुरूवात बिन्दु प्रदान गर्दछ)
सामान्य रूपमा, तपाईंको एपीआई उपयोग स्केलिंग र तपाईंको वेबसाइट ट्राफिक स्केलिंग dec
आशा छ कि मद्दत,
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::27। बिहान
हो, मँ पहिले नै संस्करण २ को विकास गर्दैछु जहाँ प्रयोगकर्ताले आउटपुट क्याच गर्न सक्दछ र समयावधि सेट गर्न सक्दछ ... सायद hours घण्टा = calls कल प्रति दिन ... instead०० को सट्टामा
साथै, म यसलाई वर्डप्रेस विजेटमा निर्माण गर्दैछु। म यसलाई विभिन्न ढाँचामा विस्तार गर्न सक्दछु ... जस्तै ट्याग, ब्याजेट, इत्यादि।
तपाईले वास्तवमै एपीआई कल थ्रेसोल्डलाई तपाईको विकासकर्ता समुदायमा राख्नुपर्दछ त्यसैले मान्छेहरू यसको बारेमा जान्न सक्दछन्।
मार्गदर्शनको कदर गर्नुहोस्,